आखिर किन कम हुन्छ महिलामा यौ,न चाहना ? - jagritikhabar.com
अक्सर के देखिन्छ भने, यौ,नका लागि पुरुष नै सधै तत्पर हुनुपर्ने । अर्थात पुरुषको इच्छा अनुसार नै महिलाहरु यौ,नका लागि तयार हुन्छन् ।
यौन मा महिला अग्रसर हुँदैनन् । दम्पतीबीच हुने यौ,न सम्बन्धमा श्रीमानको इच्छा सर्वोपरी हुन्छ । श्रीमतीहरु यौ,न सम्बन्धका लागि इच्छा जाहेर गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा त उनीहरु आफ्ना पार्टनरकै खातिर मात्र यौ,नका लागि तयार भएको जस्तो पनि देखिन्छ । श्रीमती आफै अग्रसर हुने, आफ्नै इच्छा मुताविक यौ,न आसन बदल्ने, आफ्नो सन्तुष्टिलाई बढी ध्यान दिने गरेको पाइदैन ।
उनीहरु पुरुषको यौ,न सन्तुष्टिका लागि आफुलाई समर्पण गरिरहेका हुन्छन्, भलै त्यसबाट उनीहरुले पनि आनन्द लिन सक्छन् ।
यौ,न सम्बन्धका बेला पनि पुरुष जति सक्रिय हुन्छन्, महिलाहरु त्यती हुँदैनन् । धेरैजसो महिला निस्त्रिmय जस्तै हुने गर्छन् । के उनीहरुमा यौ,न चाहना कम भएको हो ? के उनीहरु यौ,नमा उदासिन छन् ? स्वभाविक रुपमा जिज्ञासा उठ्छ ।
दम्पतीबीच नियमित यौ,न सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । यसले उनीहरुको भावनात्मक सम्बन्धलाई थप कसिलो र रसिलो बनाउँछ । तर, यौ,न सम्बन्धको प्रसंगमा महिलाहरु उति खुल्दैनन् । उति सक्रिय हुँदैनन् । उति अग्रसर हुँदैनन् । एक अध्ययनमा भनिएको छ, पुरुषको तुलनामा महिलाहरु यौ,न सम्बन्ध बनाउने कुराले उदास रहन्छन् ।
महिलामा यौ,न इच्छा त्यसकारण पनि कम हुँदै जान्छ कि, जब उनीहरुको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थाल्छ । दम्पतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । प्रेमिल छैन । झैझगडा, मनमुटाव, भनाभन भइरहन्छ भने त्यसले महिलाको यौ,न जीवनमा सोझो प्रभाव पार्छ । आफ्ना पार्टनरसँग उनीहरु भावनात्मक रुपले जति टाढिदै जान्छन्, महिलाको यौ,न इच्छामा पनि ह्रास आउन थाल्छ ।
यसका साथै पार्टनरको यौ,न समस्या, भावनात्मक सन्तुष्टि नमिल्नु र बच्चाको जन्म पनि यसको कारण हुनसक्छ ।
दिनभरको कामले हुन्छन् । राती शरीरले विश्राम माग्छ । अन्य समय पार्टनरसँग अन्तरंग पल विताउने फुर्सद र अनुकुलता हुँदैन । यसले गर्दा पनि महिलामा यौ,न चाहना कम हुन्छ ।